दु,खद खबर: नेपालबाट अष्ट्रेलिया गएका एकजना विद्यार्थीमा कोरोना सं,क्रमण भएको पुष्टी…हेर्नुहोस!::Point Nepal
दु,खद खबर: नेपालबाट अष्ट्रेलिया गएका एकजना विद्यार्थीमा कोरोना सं,क्रमण भएको पुष्टी…हेर्नुहोस!
तास्मानिया , गत फरबी २६ मा नेपालबाट आएका अष्ट्रेलियाको ता’स्मानिया बस्ने एकजना २० बर्षमाथिको व्यक्तिमा कोरोना सं,क्रमण पुष्टी भएको छ । उनी सिंगापुर र सिड्नी ट्रा’न्जिट भएर तास्मानिया गएको जनाइएको छ ।उनलाई फरबरी २७ मा नै रु,घाखोकीको जस्तो ल’क्षण देखिएपनि उनले मार्च ६ सम्म ह’टलाइन नम्बरमा सम्पर्क गरेका थिएनन् । शुक्रबार उनको रो’यल हो’बर्ट अ,स्पतालमा प’रीक्षण गरेपछि आइसोलेसनमा बस्न भनिएको थियो । तर उनले त्यसको अ’वज्ञा गरेका थिए ।आइसोलेसनमा बस्न भनिएपनि उनी अर्कोदिन काममा गएको जनाइएको छ ।
आइसोलेसनमा बस्न नमानेका उनको शनिबार प्राप्त रि’पोर्टमा कोरोना सं,क्रमण पुष्टी भएको छ । त्यसपछि उनलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ ।ता’स्मानियाका जनस्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर मा’र्क भे’इचले आइसोलेसनमा बस्न नमान्ने ती व्यक्तिको हर्कत अस्’वीकार्य भएको बताएका छन् । ती व्यक्ति अष्ट्रेलियन आ’इडिल कलेजका विद्यार्थी रहेको जनाइएको छ ।उनले ग्रा’ण्ड चा’न्सलर होटलमा पा’र्टटाइम काम गर्ने गरेको जनाइएको छ । अधिकारीहरुले उनको नजिकको सम्पर्कमा आएका होटलमा काम गर्ने अन्य कामदारहरुबारे अ,नुसन्धान गरिरहेका छन् ।